ANKAZOTOKANA - ANOSIMAHAVELONA : Lehilahy maty notolomin’ny mpamosavy
Tranga hafakely no nanaitra ny mponina tao amin’ny tanànan’Ankazotokana-Anosimahavelona eto an-drenivohitra, nanomboka tamin’ny herinandro lasa teo ka hatramin’izao. 18 octobre 2017
Lehilahy iray izay voalaza fa notaingenan’ny mpamosavy no nindaosin’ny fahafatesana noho ny ratra sy ny daroka nanjo azy. Araka ny loharanom-baovao avy teny amin’ny manodidina dia nitaraina io lehilahy io tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo fa notolomin’ny mpamosavy ny tenany rehefa handeha hody avy niandry faty teny amin’ny manodidina ny tanàna misy azy ireo ihany.
Talanjona tokoa ny rehetra ny maraina raha nahita azy naratra sy feno mangana ka avy hatrany dia nitondra ity rangahy ity tany amin’ny tobim-pahasalamana mba hatao fizahana. Nandritra ny fitsaboana natao taorinan’izay tranga izay dia nanamafy ilay lehilahy fa mafy dia mafy loatra ny kapoka nahazo azy tamin’ny fotoana nivelesan’ny mpamosavy ny vatany. Porofon’izany mivaingana ny fahitana ny tenany iray manontolo feno dianà karavasy.
Nanao ezaka ny fianakaviany nanao ny fitsaboana hitazomana ny ainy saingy nindaosin’ny fahafatesana tamin’ny alatsinainy hariva teo izy raha ny fanampim-panazavana voaray hatrany. Vaky vava ny fianakavian’ity ranamana ity tao anatin’ny fisehoan’ny loza ary nananatranatra ny taranaka faramandimby mba tsy ho sahisahy ratsy intsony. Marihana fa fony fahavelon’io rangahy io dia nilaza ny tsy matahotra izany mpamosavy izany velively ny tenany. Sendra ny taolana anefa ralehilahy tamin’ity indray mitoraka ity ka nanaraka hatramin’ny ainy mihitsy ary nijalijaly vao tapitr’aina.
Voalaza fa mpody alina matetika teo an-tanàna ny tenany fa tsy nampoizin’ny maro ny fiafaran’ny fahasahiany.